Mareykanka oo war ka soo saaray weerar ay A-Shabab ku qaadeen saldhig ku yaalla Kenya
Mjournal :-Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay weerar saaka lagu qaaday saldhiga Manda Bay oo ku yaalla deegaanka Lamu ee gobolka xeebta Kenya. War qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee (AFRICOM) ayaa lagu sheegay in uu jiro weerar ay Al-Shabab ku...
Mikel Arteta Oo Go’aan Ka Gaadhay Haddii Masuuliyadda Kabtanimada Uu Ka Qaadayo Aubameyang
Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa go’aan ka gaadhay laacibka ahaanaya kabtanka Gunners xili ciyaareedkan, taas oo soo afjartay hadal-hayn maalmahanba ka taagnayd arrintan. Laacibka reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa kabtanka Arsenal loo magacaabay markii...
Somalia’s al-Shabab extremist group attacked a military base used by U.S. and Kenyan troops in coastal Kenya early Sunday, destroying U.S. aircraft and vehicles, Kenyan authorities said. Kenya’s military said the pre-dawn assault was repulsed and at least four attackers were...
Maxkamad xukun ku ridey Siyaasiyiin iyo Odayaal dhaliiley Puntland
Mjournal :-Maxkamada Darajada kowaad ee gobalka Bari ayaa Maanta waxaa ay xukuno kala duwan ku ridey Siyaasiyiin iyo Odayaal dhaliiley Madaxda Maamulka Puntland. Siyaasiyiinta iyo Odayaasha oo markii labaad Maxkamadda la horkeeney ayaa waxaa Maanta lagu ridey Xukuno isugu jira...
The U.S military said Sunday afternoon it is monitoring the situation in Kenya’s Lamu region following an attack by the militant group Al-Shabaab on a military base which hosts Kenyan and US. Troops. The US Africa Command (AFRICOM) confirmed in a tweet the incident and noted it...
Mjournal :-Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey in weerar lagu qaaday saldhig millatari oo ku yaal Kenya oo ay degan yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha millatariga Mareykanka. Kooxda al-Shabab ayaa sheegatay mas’uuliyada weerarka oo ay masuuliyiinta Kenya sheegeen in lagu...
Weerar culus oo Al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidanka Mareykanka iyo Kenya
Mjournal :-Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar xoogan oo weli ka socda Saldhig ay leeyihiin Ciidamada Mareykanka ee Badda iyo kuwa Kenya, kaasi oo ku yaal Gobolka Lamu ee waddanka Kenya. Weerarka oo ahaa mid ku bilowday Qaraxyo ayaa waaberigii hore ee saakay rag ka tirsan...
Jubbaland oo ku dhawaaqday howlgalka dhan ah Al-Shabaab
Mjournal :-Saraakiisha Ciidamada Jubbaland ayaa waxaa ay sheegeen inay kordhin doonaan howlgallada Al-Shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Gobolada Jubbooyinka. Taliyaha Guud ee Ciidamada Jubbaland Aadan koojaar ayaa sheegay in Al-Shabaab lagala wareegay deegaano...
Mjournal :-Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay taariikhda waxaa ay yeelaneysaa Sharciga duulista rayidka,kaas oo Soomaaliya aysan waligeed yeelan laga soo bilaabo sanadkii 1960-kii. Maareeyaha Hay’adda Duulista Rayidka Axmed Macalin ayaa sheegay in...
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo magacaabay guddi howlgali doona Afar bilood kaddib
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa magacaabay guddiga qaban-qaabada xuska sanad guurada 60aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26ka June iyo 1da July. Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo...